musha >Products >Fence accessories
Tinopa hukuru hwevinyl fence accessories iyo inoivhura zvakananga kuisa purogiramu yekamuri yako yekunze kwekamuri yepamusoro kuti ifanane nemafungiro ako akajeka uye chimiro. kuwedzera kumapupa, masheji emasipire uye mashure ekugadzirisa iwe uchafanira kuisa zvisiri izvo zvefashoni kune fence yako itsva kana kunyorera, iwe unogona kuwedzera kuwedzera kupararira kwezvigadzirwa zvinowedzera kuisa nekuchengetedza zvakananga, kufanana nevinyl fence glue, notcher, mabhatri anodzoserwa for star caps uye Fast2K, iyo yakakwirira uye yakawedzerwa yakasiyana-siyana yakasiyana nekrete.
Accessorize fence yako itsva kana ipo iripo nekodhikonikisi yeganda fence zvinhu. pane pane zvimwe kune fence pane mapurisa asina kukwirira uye mapuketeni! Fence accessories inowedzerawo kuisa fence yako kuti ive nehuwandu hwehumwe hunoga, kuita kubhururuka mhepo uye zuva, uye kutema kubva kumusoro kusvika pasi pasi panhare uye mapurisa.
Wholesale High quality Kuchengetedza munda unogadzira
PVC yakajeka 2 rairi fence
PVC plastiki vinyl bhiza paddock 4 masvingo ezvitoro
Bindu Fence Accessories
Tine zvakadzama zvakasiyana-siyana zvebindu rekuvhara muzvidimbu zvakagadzirwa pamwe chete nekare yekare fence panels uye picket cheni. Gadzira mhirizhonga yakachengeteka nefence uye fence posts, edza munda wako zvakawanda zveunhu ne trellis uye kuongorora kana kubudisa yakanaka itsva ye entree kumberi kwako kana kumashure.
Zvichida kana kuti kwete iwe unongotora chete rimwe rakaputsika panhizha kana kamwe kamwe kutarisa kwemazuva ano, tine zvinhu zvose zvaunoshuva kuburikidza nekufuridzirwa, kufambisa uye kukurudzira uye unhu huripo hupi hupi hupi hupi hupi hupi hunoendeswa kumusha kutumira. Nzvimbo dzedu dzekutengesa uye nzira yekutungamira zvinogona kuita kuti iwe usarudze uye utarise danda rakakodzera remunda wako.
Fence Accessories uye Fittings
Chisarudzo chedu chikuru chevinyl fence zvinhu zvinogona kuchengetedza vinyl fence kana kutuka kuedza zvakanakisisa. isu tinowanzova forerunner mune vinyl fencing zvinhu, nekuda kwekuzvipira kupa mhando chaiyo yezvigadzirwa kune vatengi vedu. Kubva padzivande fence uye fence yefora kusvika padziva fence, fence, kunyorera uye zvakawanda-zvakasiyana zvachose zvakagadzirwa zvakasiyana, zvakakura uye mavara - tinowanzova nechinhu chimwe kune vose.
Kwete chete tinogona kupa mhizha-inotungamirira rusvingo nekutuka, kunyange zvakadaro isu tinowanzoti tibvumirei pamwe chete kupa sarudzo yakasarudzwa yezvinyorwa uye zvigadzirwa kuti upe kunze kwemasuo kugadzirisa kutarisa kwakanaka kwawakawana uchida.
Tine zvese zvakakosha vinyl fence accessories izvo zvinogona kuchengetedza vinyl fence yako ichida. pasinei nokuti uri kuedza kutsvaga zvigadziro zvekubatsira kuvakwa kwekugadzira zviri nyore kana kuti kuda kuisa kugadzirisa kwekupedzisira kune fence yako itsva, tine vinyl fencing zvinhu kwauri.
Chii Chaunotarisira Kubva pa Picket Fence Accessories?
Rudzi urwu rwefambo rukave rwakashandiswa zvikuru. Yakatora nzvimbo yekutanga yezvidhinha zvekare uye mashomanana akachengeterwa netrail net, kuita hupenyu hwako hupenyu huripo, hunofadza, hwakachena uye hutsva. Kushandiswa kwaro kwakakura kunobva mukutsvaga kwevanhu kwemazingira, kuparidzirwa kwehutsanana hwehupenyu uye kunamatwa kwemanzwiro akadai. Pointed guardrail yakadikanwa uye inoshandiswa nevanhu nekuda kwekugadzirwa kwayo kwakanaka uye maitiro akasiyana.
Izvo zvikamu zvehuta rakasungirirwa rakachengetedzwa zvinosanganisira: fence yakagadzirwa nehuni inopisa yakagadzirwa, danda rinosungiriza fence - Angle iron neshongwe inotsigira - i-steel. Unganidza zvinhu zvose ne anti-weft accessories, anti-kubavha kunosimba!
Picket Fence Accessories - Chii Chiri?
Picket Fence inogona kunge yakaita fambo yekare yefence yakagadzirwa kubva ku picket pales yakagadzirirwa kusvika kune chitima uye zvikasi zvakasara pakati pepales. iyo mafashoni yakave yakashandiswa kwemakore anoverengeka uye inowanzoonekwa yakapoteredza mberi minda. Picket fencing ndeyokuti yakanakisisa yekugona kudzivirira kana kuisa miganhu, asi uchiri kubvumira chiedza chekuyera.
Iro danda rinogona kusanganiswa mune dzakawanda dzimba uye minda, saka inogona kunge yakakwanisa kuve yakashandiswa mushure mekuchengetedza munda wekudzivirira semadziva kana madziva ekugezera asi kwete kuvhiringidza maonero kana kuodza mwoyo.
Picket fencing inowanikwa mumhando yekare, pose apo zvikamu zvose zvinotengeswa severally (pales, rails uye zvigaro) uye yakaitwa pawebsite inowanzonzi sekutochera kambo kambo. iyo inopesana nemapato evhareji evharo, iyi inogona kuva kamwechete panotengeswa seShamwari muChiremba chimwe chinhu ndokuzoiswa muzvikamu zvakapetwa.
Ipeji yakagadzirwa nemikombe yakagadzirwa nemapapiro emadziro edzimba uye pamwe chete masuo muvharo rakachengetwa inowanikwa.
Jovyea iyo inyanzvi yekugadzira Chinese (factory / wholesaler / suppliers) iyo ine hanya nekugadzira, kukura nekugadzirwa kwefence accessories profiles.Our chain chain inozadza, yakanaka, yakanaka. Zvose zvemiti yedu inoteerera nehutano hwakanaka hwehutano hwemhando, zvigadzirwa zvedu zvave zviri vazhinji vevatengi pamwe chete vanobvumirana.